family Archives — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
qoyska qoyska qoyska qoyska qoyska qoyska qoyska qoyska qoyska qoyska qoyska qoyska qoyska qoyska
Yaan ahay? PT. 2: hirgeliyey
Markii ugu danbeysay ee aasaaska qaar ka mid ah aan la dhigay dood ku saabsan aqoonsiga. Waxaan la hadlay oo ku saabsan waxa ay ka dhigeysaa aqoonsi muhiim ah; inta badan in haddii aan la garan karin cidda aynu nahay, garan mayno doonaa sida aan u malaynayeen in ay ku noolaadaan. Ka dibna waxaan la hadlay oo ku saabsan sida aan qurux badan dhigay, laakiin jebisay. Oo maxaa yeelay of our brokenness aan kala Ilaah iyo u baahan Badbaadiye.
Saaka waxaan u socoto si ay ugala hadlaan mid ka mid ah xaqiiqooyinka qurux badan oo ku saabsan in la badbaadiyey by Ilaah, taas oo ah ansaxinta. Halkaa marka ay marayso in kastoo, dooda aqoonsiga isbeddelka waxoogaa yar. Dhamaan waxyaabaha aan ka hadlay habeenkii la soo dhaafay in aan sameeyey by Ilaah, Ilaah idin gartay, jabay, iyo kan baahan-yihiin dhabta ah ee qof walba on Earth ah. Waxyaalaha aan ku socoto in ay ka hadlaan, haatan wax waluba waa in runta ah kuwa Masiix. Waxaan hadda ka hadlaynaa sida aqoonsiga badala marka aan ku noqon lahaayeen Masiixiyiin
Dhawaan Waxaan akhriyey Biography ah Steve Jobs, aasaasaha iyo aragti ka dambeeya Apple, shirkadda ugu weyn caalamka. Waxay ahayd runtii xiiso leh in uu akhriyo maxaa yeelay, wuxuu ahaa hanad a…